नेपाल भित्रियो झण्डै करोड सलह, कति जिल्लामा पुर्यायो क्षति ? - Deshko News Deshko News नेपाल भित्रियो झण्डै करोड सलह, कति जिल्लामा पुर्यायो क्षति ? - Deshko News
नेपाल भित्रियो झण्डै करोड सलह, कति जिल्लामा पुर्यायो क्षति ?
अफ्रिकी मुलुकबाट निस्किएर भारत हुँदै नेपाल भित्रिएको बाली नोक्सान गर्ने सलह किरा नेपालका धेरै जिल्लामा फैलिसकेको छ। झण्डै ८० देखि ९० लाखको हाराहारीमा नेपाल भित्रिएको सलहको झुण्डको फैलावट धेरै भए पनि विखण्डन हुँदै गएको कीट विज्ञको भनाइ छ।
हावाको गतिमा आएको परिवर्तनले गत शनिबार सलह भारतबाट निजगढ हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको थियो। सलह बुधबारसम्म ५२ जिल्लामा पुगेको बताइएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयद्वारा सलह कीरा अध्ययनका लागि गठित प्राविधिक कार्यदलका सदस्य तथा कीट विज्ञ समुन्द्रलाल जोशीले नेपालमा भित्रिएको सलह विभाजन हुँदै गएकाले ठूलो क्षति निम्त्याउने खतरा नदेखिएको बताए। उनले भारतबाट नेपालको सीमा नजिक अन्य झुण्डहरु आउँदै गरेकाले थप झुण्ड प्रवेश गर्नसक्ने सम्भावना कायमै रहेकोसमेत बताए।
सलहलाई फुल पार्नका लागि मरुभूमि नै चाहिने भएकाले नेपालमा बसेर फुल पार्छ भन्ने कुरा सत्य नभएको उनको भनाइ छ। ‘कि त जहाँबाट आएको छ, त्यहीँ फर्कनुपर्छ, होइन भने मरेर जान्छ, नेपालमा यसले फुल पार्ने सम्भावना न्यून छु, जोशीले भने।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार सलहले मुलुकका केही जिल्लामा देखिने गरी क्षति पुर्‍याएको छ। बारामा मकै तथा तरकारीबालीमा क्षति पुर्‍याएको छ। हेटौँडामा झण्डै १०० हेक्टरमा नै क्षति पुर्‍याएको विवरण आएको छ। अन्य जिल्लामा पनि क्षति पुर्‍याएको तर क्षतिको विवरण सङ्कलनको क्रममा रहेको छ । अन्नपुर्ण पोस्ट